जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्दै माइकिङ गर्ने को थियो ?
प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन ३, २०७५
काठमाडौं । विहीबार जुम्लाका डीएसपी डा. तपन दाहालले माइकिङ गर्दै भने- ‘एकजना प्रहरी जवानको मृत्यु भइसकेको छ । हाम्रो प्रहरी जवान पनि मरेको हुनाले, क्याजल्टी भएको हुनाले… हामीले पनि धेरैबेर संयमता अपनायौं । तपाईहरु कोही आन्दोलन गर्न आउनुभएको छ भने गर्नोस्, केही छैन त्यसमा । हामी तयार छौं तपाईहरुलाई…. ‘
तर, तपाईले यस्तो सम्वोदनशील विषयमा किन गलत सूचना प्रवाह गरेको त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले कड्किँदै भने – ‘जे बुझ्नु भा’छ, त्यहीँ लेख्दिनू ।’